Music ကိုအဓိပ္ပာယ်ဂရိစကားလုံးကနေဆင်းသက်လာသည့်အနုပညာပုံစံဖြစ်ပါတယ် "ဟုအဆိုပါမူဆယ်မြို့၏အနုပညာ။ " ရှေးခေတ်ဂရိနိုင်ငံမှာတော့မူဆယ်ထိုကဲ့သို့သောစာပေ, ဂီတနှင့်ကဗျာအဖြစ်အနုပညာမှုတ်သွင်းသူနတ်ဖုရားရှိကြ၏။
ဂီတတူရိယာနှင့်အတူလူ့အချိန်အရုဏ်ကတည်းကခြင်းနှင့်အသံကျယ်လောင်သီချင်းမှတဆင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအချို့မဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ပထမဦးဆုံးဂီတတူရိယာကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်အခါ, အရှိဆုံးသမိုင်းပညာရှင်အနည်းဆုံး 37,000 နှစ်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းတိရိစ္ဆာန်အရိုးကနေဖန်ဆင်းတော်အစောပိုင်းပုလွေထောက်ပြ။ နေစဉ်တွင် ရှေးအကျဆုံးစာဖြင့်ရေးသားသီချင်း 4000 နှစ်ကကျောစတငျနှင့်ရှေးခေတ်ကျူနီဖောင်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခဲ့သည်။
တူရိယာဂီတအသံစေရန်ဖန်တီးထားကြသည်။ ထိုသို့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်ဆိုပါကအသံကထုတ်လုပ်မဆိုအရာဝတ္ထုအများစုအထူးသဖြင့်တစ်ဦးဂီတတူရိယာအဖြစ်ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကနေရာစုနှစ်ကိုကျော်တက်လှီးဖြတ်ဘူးသောအမျိုးမျိုးသောတူရိယာမှာကြည့်လိုက်ပါ။
မိုက်ကယ် Blann / Iconica / Getty Images
တစ်ခုကအကော်ဒီယန်သံကိုဖန်တီးရန်ကျူနှင့်လေကြောင်းကိုအသုံးပြုထားတဲ့တူရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ကျူလေကြောင်းအလှည့်တစ်ဦးအသံကဖန်တီးသောတုန်ခါရန်ကျော်ဖြတ်သန်းကြောင့်ပစ္စည်းပါးလွှာ strips တွေဖြစ်ကြသည်။ လေထုတစ်ဖို, ထိုကဲ့သို့သောချုံ့အိတ်အဖြစ်လေထု၏အားကြီးသောပေါက်ကွဲမှု, ထုတ်လုပ်မယ့် device ကိုထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဂီတပညာရှင်ကွဲပြားကွင်းနှင့်တန်ချိန်များစွာကျူဖြတ်ပြီးလေအတင်းရန်ခလုတ်များနှင့်သော့ကိုတိုက်တွန်းနေချိန်တွင်အဆိုပါအကော်ဒီယန်လေထုဖိုနှိပ်ခြင်းနှင့်တိုးချဲ့နေဖြင့်ကစားနေသည်။ နောက်ထပ် "
Caiaimage / မာတင် Barraud / Getty Images
အဆိုပါ 1820 ခုနှစ်, လူးဝစ် Spohr အဆိုပါစပယ်ယာရဲ့တုတ်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ များအတွက်ပြင်သစ်စကားလုံးဖြစ်သောတစ်ဦးကတုတ်, "ချောင်းကို" ဂီတသမားတစ်ဦး ensemble directing နှင့်အတူဆက်စပ်လက်စွဲစာအုပ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများကျယ်စေခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်အဓိကအားကာကွယ်နေဖြင့်အသုံးပြုသည်။ မတိုင်မီကသည်၎င်း၏တီထွင်မှုရန်, ကာကွယ်မကြာခဏတယောလေးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ပေသည်။ နောက်ထပ် "
Supoj Buranaprapapong / Getty Images အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ
ခေါင်းလောင်းထိုးဒေသန္တရတူရိယာအဖြစ်ကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်အချက်မှာအစိုင်အခဲပစ္စည်းများ၏တုန်ခါမှုအားဖြင့်မြည် idiophones, ဒါမှမဟုတ်တူရိယာအဖြစ်ခွဲခြားနှင့်နိုင်ပါသည်။
အေသင်, ဂရိ, အတွက် Agia Triada ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာခေါင်းလောင်းခေါင်းလောင်းရာစုနှစ်ကျော်ဘာသာရေးထုံးတမ်းနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်နေဆဲဘာသာရေးန်ဆောင်မှုများအတွက်အတူတကွအသိုင်းအဝိုင်းဖုန်းခေါ်ယနေ့အသုံးပြုကြသည်ဘယ်လောက်ကောင်းတစ်ခုဥပမာဖြစ်ကြသည်။
Jackie Lam / EyeEm / Getty Images
အဆိုပါ Clarinet ရဲ့နောင်တော်ပု chalumeau, ပထမဦးဆုံးစစ်မှန်တဲ့တစ်ခုတည်းသောကျူပင်တူရိယာဖြစ်ခဲ့သည်။ Johann Christoph Denner, အဘားရို့ခေတ်တစ်ကျော်ကြားသောဂျာမန် woodwind တူရိယာထုတ်လုပ်သူ, အ Clarinet ၏တီထွင်သူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ နောက်ထပ် "
အနည်းငယ်အမည်ကိုငှါ, ဘေ့စ, contrabass, ဘေ့စတယော, ဖြောင့်မတ်ဘေ့နှင့်ဘေ့: အဆိုပါနှစ်ဆဘေ့အများအပြားအမည်များအားဖြင့်တတ်၏။ တူရိယာ၏အစောဆုံးလူသိများကို double-bass သံ-type အမျိုးအစား 1516. ပြန်စတငျရ Domenico Dragonetti အဆိုပါတူရိယာ၏ပထမဦးဆုံးအကြီးအ virtuoso ကြီးနှင့်သံစုံတီးဝိုင်းပူးပေါင်းနှစ်ဆဘေ့အဘို့အများအားဖြင့်တာဝန်ရှိသည်။ နှစ်ဆဘေ့ခေတ်သစ်ဆင်ဖိုနီသံစုံတီးဝိုင်းများတွင်အကြီးဆုံးနှင့်နိမ့်ဆုံး-ကိုဆောက်ညွှတ် string ကိုတူရိယာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် "
အဆိုပါပညာရှင် Hans Adler စုဆောင်းမှုထဲမှအစောပိုင်းဘယ်လ်ဂျီယံ Dulcimer (သို့မဟုတ် Hackebrett) ။ Aldercraft / Creative Commons
အဆိုပါအမည် "dulcimer" ဟုအဆိုပါကနေကြွလာ လက်တင်နှင့်ဂရိ ကိုဆိုလိုတာမှပေါင်းစပ်ထားတဲ့စကားလုံးများကို dulce နှင့် Melo, "ချိုမြိန်ညှိ။ " တစ်ဦးက dulcimer ပါးလွှာသော, ပြားချပ်ချပ်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုဆန့်အများအပြားညှို့ထားရှိရေးကြောင်းစောင်းတီး၏ zither မိသားစုထံမှလာသည်။ တစ်ဦးကထု dulcimer လက်ကိုင်သံတူများကလုပ်ကြံအများအပြားညှို့ရှိပါတယ်။ တစ်ဦးလုပ်ကြံ string ကိုတူရိယာဖြစ်ခြင်းကြောင့်စန်ဒရား၏ဘိုးဘေးတို့အကြားဖြစ်စဉ်းစားသည်။ နောက်ထပ် "
လျှပ်စစ် Organ တွေကို
တစ်ဦးအသင်းတော်၌ installed တစ်ဦးကထုံးစံသုံးလက်စွဲရော့ဂျာ Trillium ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို console ကို။ ပြည်သူ့ဒိုမိန်း
ယင်းအီလက်ထရောနစ်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို၏ချက်ချင်းယခင်အဆိုပါ harmonium, ဒါမှမဟုတ်ကျူပင်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို, နေအိမ်များနှင့်အသေးစားအသင်းတော်များနှောင်းပိုင်း 19 နှင့် 20 ရာစုအစောပိုင်း၌အလွန်လူကြိုက်များခဲ့သည်တစ်ခုတူရိယာဖြစ်ခဲ့သည်။ မပေးလုံးဝပိုက်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ၏မတူဘဲတစ်ဖက်ရှင်အတွက်, ကျူပင်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအများအားဖြင့်အဆက်မပြတ်ခြေနင်းအစုတခုချပေးခြင်းဖြင့် operated တစ်ဖို၏နည်းလမ်းများဖြင့်ကျူလုံးအပြန်အစုတခုကျော်ဝေဟင်အတင်းအကျပ်အားဖြင့်အသံကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့။
ကနေဒါ Morse ကက Rob ယင်းက Rob Wave ကိုအော်ဂင်အဖြစ်လူသိများ 1928 အတွက်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးလျှပ်စစ်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို, မူပိုင်ခွင့်။
အဆိုပါပုလွေကျနော်တို့ရှေးဟောင်းသုတေသနထက်ပို 35000 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကြိမ် Paleolithic မှစတငျရတွေ့ရှိခဲ့သောအစောဆုံးတူရိယာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပုလွေတို့သည် woodwind တူရိယာပိုင်ဆိုင်ပေမယ့်ကျူအသုံးပြုသည်အခြား woodwinds မတူပဲ, အပုလွေ reedless သည်နှင့်တစ်ဦးအဖွင့်ကိုဖြတ်ပြီးလေထု၏စီးဆင်းမှုကနေသူ့ရဲ့အသံထုတ်လုပ်သည်။
တရုတ်တှငျတှေ့အစောပိုင်းပုလွေတဲ့ ch'ie ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ အတော်များများကရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းမှတဆင့်ချလွန်ပုလွေအချို့ကိုပုံစံရှိသည်။ နောက်ထပ် "
ဗီယင်နာချိုကို။ Creative Commons
အဆိုပါခေတ်မီ orchestral သောကြေးဝါကို double ပြင်သစ်ဦးချိုအစောပိုင်းမဲလိုက်ဦးချိုပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးတီထွင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဦးချိုပထမဦးဆုံး 16 ရာစုသရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်းစဉ်အတွင်းတူရိယာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဂျာမန် Fritz Kruspe ခေတ်သစ်နှစ်ဆပြင်သစ်ဦးချို၏ 1900 အတွက်တီထွင်သူအဖြစ်အများဆုံးမကြာခဏဘဏ်စာရင်းထဲသွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် "
အဆိုပါဂစ်တာများသောအားဖြင့်ခြောက်လရှိခြင်းလေးမှ 18 ညှို့ကနေဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်အတူတစ် chordophone အဖြစ်ခွဲခြားတစ်ဖဲ့ခြွေ string ကိုတူရိယာ, ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသံကိုတစ်ဦးဆွန်းသစ်သားသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ကိုယ်ထည်မှတဆင့်သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်အသံချဲ့စက်နှင့်စပီကာမှတဆင့် acoustic projected ဖြစ်ပါတယ်။ အသံ၏သေံပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းထမြောက်တော်မူ strips တွေ - ဒါဟာပုံမှန်အားအခြားတစ်ဖက်ဖဲ့ခြွေတစ်လျှောက်တွင်ညှို့ကိုတိုက်တွန်းနေချိန်မှာတဦးတည်းလက်နှင့်ကြိုး strumming သို့မဟုတ်အသီးအနှံကိုဆွတ်ခြင်းဖြင့်ကစားနေသည်။
တစ်ဦးက 3000 နှစ်အရွယ်သောကျောက်ထွင်းထုခြင်းတစ်ဦးကြိုး chordophone ကစားသည်ဟိတ္တိအမျိုး Bard အများစုဖွယ်ရှိကျြမှောကျခတျေဂစ်တာတစ်ယခင်ပြသထားတယ်။ chordophones ၏အခြားအစောပိုင်းကဥပမာဥရောပတယောနှင့်မူးရစပိန်ကျွန်းဆွယ်မှဆောင်ခဲ့သောလေးပါး-string ကို oud, ပါဝင်သည်။ အဆိုပါခေတ်မီဂစ်တာဖွယ်ရှိအလယ်ခေတ်စပိန်ဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် "
de Agostini / G. အ Nimatallah / Getty Images
တစ်ဦးက harpsichord, စန္ဒရား၏ယခင်တစ်ဦးကကစားသမားတစ်ဦးသံကိုထုတ်လုပ်ရန်ကိုတိုက်တွန်းကြောင်းခရိုနီရှိပါတယ်တဲ့ကီးဘုတ်များအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကစားနေသည်။ ကစားသမားတစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသော့ကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါ, ဒီသေးငယ်တဲ့ quill နှင့်အတူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ပိုပြီးညှို့ plucks သောယန္တရား, အစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
1300 ခန့်ဟာ harpsichord ၏ဘိုးဘေး, အရှိဆုံးဖွယ်ရှိတဲ့လက်ကိုင်ဆွတ်တူရိယာနောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးကီးဘုတ်ကဆက်ပြောသည်ခဲ့သည့်တယောကိုခေါ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ harpsichord အဆိုပါ Renaissance နှင့်ဘားရို့ခေတ်ကာလအတွင်းရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏လူကြိုက်များ 1700. ပို»အတွက်စန္ဒရား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူလျော့
တစ်ဦးက Wittner စက်မှုလေတိုက်-up, metronome ။ Badajoz, Espana / ကို Creative Commons မှ Paco
တစ်ကလစ်သို့မဟုတ်အခြားအသံက - - ပုံမှန်ကြားကာလမှာအသုံးပြုသူတစ်မိနစ်လျှင်စည်းချက်သတ်မှတ်နိုင်သည်ကိုတစ်ဦးက metronome အသံထှကျစည်းချက်ထုတ်လုပ်မယ့်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ဂီတသမားတစ်ဦးကိုပုံမှန်သွေးခုန်နှုန်းမှကစားလေ့ကျင့်ဖို့ device ကိုအသုံးပြုပါ။
ပထမဦးဆုံးအလုပ်လုပ်ကိုင် metronome 1814. ပို»သည်အထိတည်ရှိသို့မလာဘဲပေမယ့် 1696 မှာတော့ပြင်သစ်ဂီတပညာရှင် Etienne Loulie တစ် metronome ဖို့ချိန်သီးလျှောက်ထားရန်ပထမဦးဆုံးမှတျတမျးတငျထားကြိုးပမ်းမှုလုပ်
Moog စုပေါင်း။ မာကု Hyre / Creative Commons
ရောဘတ် Moog တေးရေးဟားဘတ်အေ Deutsch နဲ့ Walter ကားလို့စ်နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. သူ၏ပထမဦးဆုံးအီလက်ထရောနစ်စုပေါင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ စုပေါင်းစန္ဒရား, ပုလွေ, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါနဲ့တူနဲ့အခြားတူရိယာအသံတုပဖို့သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်လုပ်သောအသစ်ကအသံအောင်အသုံးပြုကြသည်။
Moog စုပေါင်းထူးခြားတဲ့သံကိုဖန်တီးရန် 1960 ခုနှစ် Analog စ circuits များနှင့်အချက်ပြကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်ထပ် "
ကျူပင် (Lorée, ပဲရစ်) နဲ့တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ် oboe ။ Hustvedt / Creative Commons
အဆိုပါ oboe, (ပြင်သစ်တွင် "အသံကျယ်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောသစ်သား" အဓိပ္ပာယ်) မတိုင်မီ 1770 မှတစ်ဦး hautbois ခေါ်သောပြင်သစ်ဂီတပညာရှင်ဂျင်း Hotteterre နဲ့ Michel Danican Philidor အားဖြင့် 17 ရာစုအတွင်းကတီထွင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ oboe တစ်ဦးကို double-Reed သစ်သားတူရိယာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Clarinet အားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်အထိဒါဟာအစောပိုင်းစစ်တပ်ကြိုးနှင့်ချည်နှောင်အတွက်အဓိကသီချင်းဆိုတူရိယာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ oboe အဆိုပါ shawm အများစုဖွယ်ရှိအရှေ့ပိုင်းမြေထဲပင်လယ်ဒေသကနေအစပြုတစ်ဦးကို double-ကျူပင်တူရိယာကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။
အာရှနှစ်ဆ Chambers ocarina ။ ပြည်သူ့ဒိုမိန်း
အဆိုပါကြွေထည်ပစ္စည်း ocarina ရှေးခေတ်လေတိုက်တူရိယာမှဆင်းသက်လာသောအိုးပုလွေ, အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဂီတလေတိုက်တူရိယာဖြစ်ပါတယ်။ အီတလီတီထွင်သူ Giuseppe Donati တည်ရှိပေမယ့်ပုံမှန် ocarina လေးမှ 12 လက်ချောင်းတွင်းနှင့်တူရိယာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေမှန်းချက်ရဲ့တစ်အာဘော်နဲ့ပူးတွဲအာကာသဖြစ်ပါတယ် 1853. အပြောင်းအလဲတွေဟာအတွက်ခေတ်မီ 10-ပေါက် ocarina တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ Ocarinas အစဉ်အလာကိုရွှံ့သို့မဟုတ်ကြွေထည်ပစ္စည်းကနေထားကြပါတယ်, ဒါပေမဲ့တခြားပစ္စည်းများလည်းအသုံးပြုကြသည်-ထိုကဲ့သို့သောနေကြသည်ပလပ်စတစ်, သစ်သား, ဖန်, သတ္တုသို့မဟုတ်အရိုးအဖြစ်။
Richa Sharma က / EyeEm / Getty Images
စန္ဒရား Padua, အီတလီ၏ရရှိပြီးပြီလို့ Bartolomeo ခရစ္စတိုဖာရီတို့ကအမြားဆုံးဖွယ်ရှိ, ယခုနှစ် 1700 ဝန်းကျင်တီထွင်ထားတဲ့ acoustic ကြိုးတူရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစန်ဒရားခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသံတူကြိုးဒဏ်ခတ်ဖို့ဖြစ်ပေါ်စေမယ့်ကီးဘုတ်ပေါ်လက်ချောင်းကို အသုံးပြု. တီးခတ်သည်။ အဆိုပါအီတလီစကားလုံးစန္ဒရားအသီးသီး "အသံကျယ်" "အပျော့" နှင့်နှစ်ဦးစလုံးကိုဆိုလိုသည်သောအီတလီစကားလုံး pianoforte တစ်ဦးကိုတိုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ယခင်အဆိုပါ harpsichord ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ် "
Harald သညျ့နိမိတျရဲ့ Multimonica (1940) နှင့်ဇော့ဂျဲနီ Ondioline (c.1941) ။ ပြည်သူ့ဒိုမိန်း
Hugh သည် Le ကာဣနကနေဒါရူပဗေဒပညာရှင်, တေးရေးဆရာများနှင့်တူရိယာဆောက်, အီလက်ထရောနစ် Sackbut ကိုခေါ် 1945 ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးဗို့အားထိန်းချုပ်ထားသောဂီတစုပေါင်း, တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကစားသမားလက်ျာလက်ကိုကီးဘုတ်ကစားရန်အသုံးပြုခဲ့စဉ်အသံပြုပြင်မွမ်းမံဖို့လက်ဝဲလက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူ့တစ်သက်တာကျော်, က Le ကာဣနတစ် touch-sensitive ကီးဘုတ်နဲ့ variable ကိုမြန်နှုန်း multitrack တိပ်ရီကော်ဒါကိုအပါအဝင် 22 တူရိယာ, ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ နောက်ထပ် "
မာရိသညျစမိုက်သ / Getty Images
အဆိုပါ saxophone လည်းတူရိယာများ၏ woodwind မိသားစုပိုင်, တစ်ဦး sax တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ကြေးဝါကိုဖန်ဆင်းသည်နှင့်တစ်ဦး Clarinet ဆင်တူတစ်ခုတည်း, သစ်သားကျူပင်အာဘော်အတူကစားသည်။ အဆိုပါ Clarinet ကဲ့သို့ပင် saxophone ကစားသမား key ကိုခရိုနီတစ်ဦး system ကို အသုံးပြု. လည်ပတ်သောတူရိယာထဲမှာတွင်းရှိသည်။ အဆိုပါဂီတပညာရှင်တစ်ဦးသော့ချက်ကိုတိုက်တွန်းသည့်အခါ, တစ်ဦး pad ပါဖုံးလွှမ်းသို့မဟုတ်ပိတ်အမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီအပေါက်တစ်ပေါက်, အရှင်စေးလျှော့ချသို့မဟုတ်ပြုစုပျိုးထောင်ဖြစ်စေ။
အဆိုပါ saxophone ဘယ်လ်ဂျီယံအဒေါ့ဖ် sax တီထွင်နှင့် 1841 ဘရပ်ဆဲလ်ပြပွဲမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အကမ္ဘာကိုပြသခဲ့သည်။ နောက်ထပ် "
ထိုင်းယွမ် Lim က / EyeEm / Getty Images
အဆိုပါ trombones တူရိယာ၏ကြေးဝါနှင့်မိသားစုကပိုင်ဆိုင်သည်။ ကစားသမားရဲ့တုန်ခါနှုတ်ခမ်းတူရိယာအတွင်းရှိလေထုကော်လံတုန်ခါစေသည့်အခါအားလုံးသောကြေးဝါတူရိယာများကဲ့သို့ပင်အသံထုတ်လုပ်နေသည်။
အဆိုပါစကားလုံး "trombones" "တံပိုးမှုတ်သောအခါ," နှင့်အီတလီနောက်ဆက် -one, အဓိပ်ပာယျအဓိပ်ပာယျ, အီတလီ tromba မှလာ "ကြီးမားသော။ " ထို့ကြောင့်တူရိယာအမည် "ကြီးမားသောတံပိုး" ကိုဆိုလိုတယ်။ အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်, တူရိယာကို "sackbut ။ " ဟုခေါ်ခဲ့သည် ဒါဟာ 15 ရာစုအတွင်းက၎င်း၏ကနဦးအသှငျအပွငျထားကွ၏။ နောက်ထပ် "
တံပိုးကဲ့သို့တူရိယာသမိုင်းကြောင်းအတိရိစ္ဆာန်ဦးချိုသို့မဟုတ် conch ခွံသုံးပြီးပြန်အနည်းဆုံး 1500 ဘီစီမှချိန်းတွေ့ဥပမာအတူစစ်တိုက်သို့မဟုတ်အမဲလိုက်သည့်ကိရိယာများကိုအချက်ပြအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ခေတ်သစ်အဆို့ရှင်တံပိုးအသုံးပြုနေဆဲအခြားမည်သည့်တူရိယာထက်ပိုမိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
တံပိုးသာနှောင်းပိုင်း 14 သို့မဟုတ် 15 ရာစုအစောပိုင်းများတွင်တူရိယာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သောကြေးဝါတူရိယာဖြစ်ကြသည်။ Mozart ၏ဖခင်, Leopold နှင့် Haydn ရဲ့အစ်ကိုမိုက်ကယ် 18 ရာစု၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်တံပိုးများအတွက်သီးသန့် Concerto ရေးသားခဲ့သည်။
လေး rotary ဆို့ရှင်နှင့်အတူ tuba ။ ပြည်သူ့ဒိုမိန်း
အဆိုပါ tuba ကြေးဝါမိသားစုထဲမှာအကြီးဆုံးနှင့်နိမ့်ဆုံးမျဂီတတူရိယာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသောကြေးဝါတူရိယာများကဲ့သို့ပင်အသံကသူတို့ကိုကြီးမားသော cupped အာဘော်သို့တုန်ခါစေခြင်း, နှုတ်ခမ်းအတိတ်လေကြောင်းရွေ့လျားနေဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည်။
Friedrich Blühmelနှင့် Heinrich Stölzel: ခေတ်သစ် tuba နှစ်ခုဂျာမန်တို့က 1818 အတွက်အဆို့ရှင်များ၏ပူးတွဲမူပိုင်၎င်းတို့၏တည်ရှိမှုကြွေး။
တေးသွား Death Metal ဆိုတာဘာလဲ
ခွေးနှင့်စပ်လျဉ်းအစ္စလာမ်မစ် Views စာ
Little က Big မြို့: အကျေးလက်ဂီတ Quartet ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
စပိန်ရဲ့အမေရိကန်ကိုလိုနီများနှင့် Encomienda စနစ်
ပိုင်ထိုက်သော Galaxy: အဠာ၏ Oddballs
Sprint နှင့် Relay ၏သရုပ်ဖော်ပုံသမိုင်း
လက်နက်များနှင့်ချပ်ဝတ်တန်ဆာအဘယျသို့သော gladiator အသုံးပြုမှုခဲ့သလား
မွတ်စ်လင်သည်သန့်ရှင်းသောဆိုဒ်များ & ညျသနျ့ရှငျးသောမြို့ကြီးများ: ချိတ်ဆက်ခြင်းသနျ့ရှငျးခွငျး, နိုင်ငံရေးနှင့်အကြမ်းဖက်မှု
Caliban - ဆွဲငင်အားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
နည်းဥပဒေ 12: ရှာဖွေခြင်းနှင့် (ဂေါက်၏စည်းကမ်းများ) Ball ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း
အဆိုပါ Essentials: အဘယျသို့ကောလိပ်များအတွက် Pack မှ